शनिबार मंगल ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दै, कुन राशिलाई गर्छ असर ? जान्नुहोस् – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/शनिबार मंगल ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दै, कुन राशिलाई गर्छ असर ? जान्नुहोस्
काठमाडौं / वैसाख २७ गते शनिबार मंगल ग्रहले राशि परिवर्तन गर्न लागेको छ । यसअघि मंगलग्रह चैत १३ गते धनु राशिबाट आफ्नो उच्च राशि मकरमा परिवर्तन भएको थियो । करिब ४५ दिन मकर राशिमा तीन ठूलाग्रह बृहस्पति, शनि तथा मंगलग्रह एकैसाथ रहँदा यसको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा फरक फरक तरिकाबाट परेको ज्योतिषीहरुले जानकारी गराएका छन् । यसरी तीन ठूलाग्रह एकैसाथ संगै बस्नु एउटा ऐतिहासिक ठूलो खगोलिय घटना भएको अनुसन्धानका लागेका ज्योतिषीहरुले बताएका छन् ।
यसले समग्र १२ राशिमा पनि फरक फरक प्रभाव पार्ने छ कन्या, वृश्चिक तथा मीन राशि हुनेहरुले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। यस्तो अबस्थामा गणेश संकट मोचनको पाठ, रुद्राभिषेक तथा शनिको पाठ र मन्त्र जप गरेमा प्रभाव कम रहने विज्ञहरुले जानकारी गराएका छन् । यो एउटा एतिहासिक खगोलीय घटना हो ।
(लेखक रिजाल ज्याेतिष तथा वास्तुविद् हुन् । उनी दक्षिण एसियाली ज्याेतिष महासंघ नेपालका महासचिव पनि हुन । उनकाे सम्पर्क नम्बर ९८५१०६११२४ रहेकाे छ)